ရစေကျတှေ ကုနျပွီထငျပါတယျ …. – Shinyoon
May 11, 2021 by Shin Yoon
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆုံဖို့မြှျောလငျ့ရငျးက တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ပွောစရာတှေ မဲ့နတေဲ့အထိ အေးစကျလာတဲ့ ဆကျဆံရေးတှကေို ကွညျ့ရငျ တဖွေးဖွေးတှေ တှေးမိလာတယျ … ကြှနျမတို့တှေ တကယျပဲ ရစေကျ ကုနျပွီလားလို့… အရငျကလို မပြျောရှငျရတော့ဘူး အရငျကလို မကွညျနူးမိတော့ဘူး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဖောငျဖှဲ့မပွောဖွဈတော့ဘူးလေ ။
အရငျကဆိုဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပဲ စရတော့မယျထငျပါတယျ .. တဈယောကျအနားမှာ တဈယောကျရှိနဖေို့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ နီးစပျဖို့ဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခွငျးတှနေဲ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဝေးနရေငျးတောငျ တဈနဆေို့တဲ့ အိပျမကျတှကေ ကြှနျမကို အိပျမကျလှလှတှေ မကျစတေယျလေ …
အခုတော့ … တဈယောကျအနားတဈယောကျ မရောကျနိုငျတော့သလို ဆုံဖို့တှဖေို့တှကေပြွနျတော့လဲ တံတိုငျးကွီးတှေ ခွားနသေလို တကယျကိုပဲ ခကျခဲလှနျးလှတယျ .. တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အဝေးကွီးမှာ နရေငျးက သူ အရငျလို မဟုတျတော့ဘူး ပွုံးနပေမေယျ့ ကြှနျမအနားမှာ မပြျောတော့ဘူး … ချေါနပေမေယျ့ ကြှနျမဆီ သူ မလာတော့ဘူး …
လမျးတှေ လြှောကျနပေမေယျ့လဲ ကြှနျမတို့အတူဆိုတဲ့ ပနျးတိုငျတှဆေီမဟုတျတော့ဘူး တဈခါတဈလမှော အရငျက သူ့ကို ပွနျလိုခငျြနမေိသလို တဈခါတဈလမှော လကျရှိဖွဈနတေဲ့အရာတှကေို လကျခံရဲတဲ့ သတ်တိတှေ ရှိခငျြလာမိတယျ … နီးမလားလို့တှေးရငျးက တဖွေးဖွေး ဝေးသှားကွတာ …. တဈခြိနျက သိပျခဈြခဲ့ဖူးတယျ ဆိုတာ တကယျ့ကို ပုံပွငျလိုပါပဲ …
ရစေကျတှဆေိုတာ ပွောရခကျတယျ ရစေကျတှေ ကုနျသှားရငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆုံဖို့ သိပျကို ခကျတယျတဲ့ … ကြှနျမတို့ဘယျလောကျခဈြခဲ့တာဆိုတဲ့ အတိတျကို အတိတျမှာပဲ ထားခဲ့လိုကျတာပဲ ကောငျးပါတယျ … ကြှနျမတို့ရဲ့ ဘယျတော့မှ မဆုံနိုငျခဲ့ခွငျးတှကေို ရစေကျကုနျသှားတယျလို့ပဲ သတျမှတျလိုကျကွတာပေါ့ … ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျ ပြျောအောငျနပေါကှယျ ။
ရေစက်တွေ ကုန်ပြီထင်ပါတယ် ….
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆုံဖို့မျှော်လင့်ရင်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြောစရာတွေ မဲ့နေတဲ့အထိ အေးစက်လာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ကြည့်ရင် တဖြေးဖြေးတွေ တွေးမိလာတယ် … ကျွန်မတို့တွေ တကယ်ပဲ ရေစက် ကုန်ပြီလားလို့ … အရင်ကလို မပျော်ရွှင်ရတော့ဘူး အရင်ကလို မကြည်နူးမိတော့ဘူး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖောင်ဖွဲ့မပြောဖြစ်တော့ဘူးလေ ။
အရင်ကဆိုဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပဲ စရတော့မယ်ထင်ပါတယ် .. တစ်ယောက်အနားမှာ တစ်ယောက်ရှိနေဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နီိးစပ်ဖို့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးနေရင်းတောင် တစ်နေ့ဆိုတဲ့ အိပ်မက်တွေက ကျွန်မကို အိပ်မက်လှလှတွေ မက်စေတယ်လေ …
အခုတော့ … တစ်ယောက်အနားတစ်ယောက် မရောက်နိုင်တော့သလို ဆုံဖို့တွေ့ဖို့တွေကျပြန်တော့လဲ တံတိုင်းကြီးတွေ ခြားနေသလို တကယ်ကိုပဲ ခက်ခဲလွန်းလှတယ် .. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဝေးကြီးမှာ နေရင်းက သူ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး ပြုံးနေပေမယ့် ကျွန်မအနားမှာ မပျော်တော့ဘူး … ခေါ်နေပေမယ့် ကျွန်မဆီ သူ မလာတော့ဘူး …
လမ်းတွေ လျှောက်နေပေမယ့်လဲ ကျွန်မတို့အတူဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်တွေဆီမဟုတ်တော့ဘူး တစ်ခါတစ်လေမှာ အရင်က သူ့ကို ပြန်လိုချင်နေမိသလို တစ်ခါတစ်လေမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို လက်ခံရဲတဲ့ သတ္တိတွေ ရှိချင်လာမိတယ် … နီးမလားလို့တွေးရင်းက တဖြေးဖြေး ဝေးသွားကြတာ …. တစ်ချိန်က သိပ်ချစ်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာ တကယ့်ကို ပုံပြင်လိုပါပဲ …
ရေစက်တွေဆိုတာ ပြောရခက်တယ် ရေစက်တွေ ကုန်သွားရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆုံဖို့ သိပ်ကို ခက်တယ်တဲ့ … ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့တာဆိုတဲ့ အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့လိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ် … ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘယ်တော့မှ မဆုံနိုင်ခဲ့ခြင်းတွေကို ရေစက်ကုန်သွားတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့ … ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ပျော်အောင်နေပါကွယ် ။
ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးထားတတျဖို့လိုတယျ …